Ifulethi elithambileyo le-2 Mieres Asturias
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLetty
30 yeemitha zokuhlala
Ilungele abantu abangabodwa okanye abatshatileyo
Igumbi lokulala le-1.35 (i-viscolastic mattress) igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle, i-patio yangaphakathi.
Idityaniswe kakuhle kakhulu neevenkile ezinkulu, imivalo edityaniswe kakuhle ayithethi ukuba kukho ingxolo, yindawo ezolileyo.
Isikhululo sebhasi 500m
Iholo yeDolophu 500m
Yingqondi, ithule, ikhululekile yeVISCOLASTIC umatrasi, igumbi lokuhlala elinesofa, iTV kwaye inayo yonke into oyifunayo ukwenza ubomi bemihla ngemihla.
Kunconywa ukuzisa izicathulo zokuhamba ngendlu.
Ungatya kwibar yesidlo sakusasa kunye nezitulo eziphakamileyo, kwitafile yokuphakamisa ukusuka kwisofa okanye nakwitafile egotywayo enezitulo.
Kumasipala waseMieres ungafumana iCalle La Vega eneebhari zewayini, iPlaza de Requejo eyaziwayo ngezindlu zayo zecider, iitapas kunye nomoya wayo olungileyo, imivalo ye-cocktail ekufutshane, ungonwabela intlambo yaseCenera. kunye izimvo zalo iindawo zepikniki. Unokuya kwidolophu endala ye-capital (OVIEDO) imizuzu eyi-10 ngemoto kunye nolwandle oludumileyo lwaseSan Lorenzo (GIJON) imizuzu engama-20.
Zonke uhola we x okanye uhola wendlela.
Indlu ikwindawo efihlakeleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Letty
Ndizofumana iindwendwe ukuba zibakhaphe ukuya eflethini, ndizofumaneka ngomnxeba kuyo nayiphi na imibuzo kwaye ndazise ngezinto eziyimfuneko. Ndiyathanda ukuba babe nemfihlo. Ndikwanayo nokuzimela ngokufika kwindawo ekhuselekileyo yezitshixo ngaphandle kokuqhagamshelana nomnini ukuze ube bhetyebhetye ngakumbi
Ndizofumana iindwendwe ukuba zibakhaphe ukuya eflethini, ndizofumaneka ngomnxeba kuyo nayiphi na imibuzo kwaye ndazise ngezinto eziyimfuneko. Ndiyathanda ukuba babe nemfihlo. Ndikw…
Inombolo yomthetho: Vut-2312-As